China Hot mumhanyi muforoma mugadziri uye nokutengesa | Mestech
Hot mumhanyi muforoma
Hot mumhanyi muforomamhando yeforoma iyo inoshandisa iyo yekudziya mudziyo kuti igo nyungudika mumumhanyi kubva mukusimbisa nguva dzese. Nekuti iyo epurasitiki mumumhanyi inogara iri mune yakanyunguduka mamiriro, uye iyo inotonhorera kamwene zvinhu hazvidi kutorwa kunze panguva yejekiseni kuumbwa. Iyo ine ipfupi inoumba kutenderera kupfuura yechinyakare muforoma, uye inochengetedza yakawanda mbishi zvinhu, saka inopisa mumhanyi muforoma rave kushandiswa zvakanyanya mune dzakabudirira nyika uye matunhu epasi.
Hot mumhanyi muforoma rudzi rweforoma iyo inoshandisa iyo yekudziya mudziyo kuti igo nyungudika mumumhanyi kubva mukusimbisa nguva dzese. Nekuti iyo epurasitiki mumumhanyi inogara iri mune yakanyunguduka mamiriro, uye iyo inotonhorera kamwene zvinhu hazvidi kutorwa kunze panguva yejekiseni kuumbwa. Iyo ine ipfupi inoumba kutenderera kupfuura yechinyakare muforoma, uye inochengetedza yakawanda mbishi zvinhu, saka inopisa mumhanyi muforoma rave kushandiswa zvakanyanya mune dzakabudirira nyika uye matunhu epasi.
Hot mumhanyi Kuumbwa maitiro muforoma chakakosha rutsigiro subsystem yejekiseni muforoma system. Inoona kuti iyo yakanyunguduka epurasitiki zvinhu mumumhanyi zvinochengetwa pane zvinogara zvichidziya kwenguva yakareba nekupisa kwemagetsi. Iyo inokosha nzira yekubatsira kuburitsa yakakura-saizi, yakatetepa-yakakomberedzwa, yepamusoro yepamusoro zvikamu zviri kugadzirwa kuburikidza jekiseni kuumbwa uye kuwana zvinobudirira kugadzirwa.
Hot mumhanyi jekiseni muforoma
Hot mumhanyi maitiro muforoma
Hot mumhanyi system mamiriro
Hot mumhanyi system inowanzo kuverengerwa neanopisa kamwene, inopisa yakawanda, tembiricha controller uye zvishongedzo. Kune mhando mbiri dzemapopu anopisa: vhura inopisa kamwene uye pini vharuvhu inopisa inopisa. Nekuti chimiro chekupisa kamwene kanosarudza musarudzo yemumhanyi sisitimu uye kugadzirwa kweforoma, inopisa mumhanyi system inowanzo kuve yakakamurwa kuita yakavhurika inopisa mumhanyi system nepini vharuvhu inopisa mumhanyi system. Iyo yekuparadzanisa ndiro inoshandiswa mune yakawanda mhango kana yakawanda poindi kudyisa, imwechete poindi yekudyisa, asi zvinhu nhanho zvaizadzisa. Mashoko acho anowanzoitwa P20 kana H13. Iyo yekuparadzanisa ndiro inowanzo kuve yakakamurwa kuita yakajairwa uye isiri-yakajairwa maviri mapoka. Chimiro chayo chinonyanya kutemerwa nekuparadzirwa kwecity muforoma, kamwene kurongeka uye chinzvimbo chegedhi. Iyo tembiricha yekudzora bhokisi inosanganisira iyo inomiririra, tambo, chinongedzo uye wiring yechirume neyevakadzi zvigadziko, nezvimwe Hot mumhanyi zvishongedzo zvinowanzo sanganisira: hita uye thermocouple, yekuisa chisimbiso ringi yemumhanyi, chinongedzo uye junction bhokisi, nezvimwe.
Hot mumhanyi system mhando:
Kune mhando mbiri dzevamhanyi vanopisa: yakavhurika inopisa inomhanya system uye tsono-vharafu inopisa inomhanya system. Ivo vanodanwa mazita maererano neakavhurika inopisa kamwene uye tsono-vharuvhu inopisa mhanya zvakateerana.
1). Vhura mhando
Iyo yakavhurika inopisa mumhanyi muforoma ine zvakwakanakira zveiri yakapusa dhizaini, yakakwira zvinhu kukamurwa, nyore waya kudhirowa uye tambo inodonhedza, yakashata yepamusoro mhando, uye mashoma mashandisirwo muHigh Precision Moulds kunze kwenyika. Iyo imwechete mold inogona kusanganiswa nemagetsi esimbi evanogadzira akasiyana. Mumhanyi anopisa anogona kuvhurwa muzvikamu zviviri: hombe yemvura chiteshi inopisa mumhanyi uye akanongedza gedhi mumhanyi anopisa. Mumhanyi anopisa wepapo gedhi, sezita zvarinoreva, gedhi regedhi repapo idiki kwazvo, kazhinji waya makumi masere chete, chigadzirwa chemukati chakatsetseka, chakakodzera jekiseni kuumba zvigadzirwa zvidiki. Gedhi hombe mumhanyi anopisa ane hombe hombe uye hombe jekiseni vhoriyamu, inoenderana jekiseni rezvigadzirwa zvakakura
2). Pin vharuvhu mhando
Pin vharuvhu mhando inopisa mumhanyi anoponesa zvinhu, pamusoro pemapurasitiki zvikamu zvakanaka, zvemukati mhando zvine chiumbane, uye simba rakakwirira. Kune maviri makuru esero-vharafu inopisa vanomhanya munyika (zvinoenderana nejekiseni musimboti): humburumbira mhando uye chitubu mhando.
Musiyano uripo pakati pechirimo mhando uye humburumbira mhando ndeyekuti haugone kudzora kuteedzana kwenguva uye kugadzirisa dambudziko rekutsvaira trace. Diki dhayamita yekupfeka isingagadzirike mhezi, masipini pini mavharuvhu uye yemukati yekudziya mabhuti akagadzirwa.
Anomhanya sei anoshanda?
Nekuti iyo yekudziya tsvimbo uye yekudziira mhete iri padyo kana pakati pemumhanyi, iyo yese mumhanyi kubva pombi yekukwira kuenda kugedhi reiyo jekiseni kuumbwa muchina iri yakakwira tembiricha nyika, iyo inochengeta iyo epurasitiki mumumhanyi mukunyungudika. nyika. Naizvozvo, inopisa mumhanyi tekinoroji dzimwe nguva inonzi kupisa pombi singi system, kana kumhanya isina kuumbwa. Hot mumhanyi system kazhinji ine inopisa inopisa kamwene, muparidzi, tembiricha yekudzora bhokisi uye zvishongedzo.
Hunhu hunopisa mumhanyi
Iko kushandiswa kweanopisa mumhanyi kufa system tekinoroji iri kuramba ichiwedzera kukura. Rine zvakawanda zvakwakanakira, iyo inosimudzira kukura jekiseni Kuumbwa indasitiri. Kune zvakare zvimwe zvikanganiso izvo isu zvatinofanirwa kufunga nezvazvo mukushandisa.
Chakanakira chinopisa mumhanyi hurongwa muforoma
A. Inokodzera zvigadzirwa zvakakura
Nekuda kwehukuru hukuru, hombe jekiseni vhoriyamu uye yakakura nzvimbo yezvikamu, zvinonetsa kuchengeta mapurasitiki mune akajairwa jekiseni kuumbwa uye kuzadza mhango mune yakanyanya tembiricha yakanyunguduka nyika. Hot mumhanyi multi-poindi jekiseni rinofanira kushandiswa kuona yakazara jekiseni kuumbwa.
B. Inokodzera Zvinhu Zvakaoma-ku-fomu
Yakakwira Viscosity, Yakadzika Viscosity, Yakakwira Kuumbwa Tembiricha. Iyo inomhanya mhanya system inogona kugadzirisa aya matambudziko. Semuenzaniso: jekiseni rehupfu hwesimbi, jekiseni rehupfu hwejekiseni, jekiseni repurasitiki remagineti, jekiseni repurasitiki, thermoplastic rubber (TPE). C. Kuchengetwa kwemutengo
Hot mumhanyi jekiseni, hapana kamwene, hapana mumhanyi marara, kunze yakawanda zvinhu mari.
D. Deredza jekiseni kumanikidza, chengetedza simba, kunatsiridza kugadzirwa kwejekiseni muchina wekutemera, kudzora kupfeka kweforoma.
E. Inokodzera kumhanya-kumhanya jekiseni kuumbwa. Yepamusoro-yekumusoro jekiseni kuumbwa kwete chete inovandudza kugadzirwa kunyatsoita kwehutete-yakakomberedzwa zvigadzirwa zvakaita semikombe nemidziyo.
F. Kuvandudza chigadzirwa mhando
In achiumba muitiro inopisa mumhanyi muforoma, tembiricha kuti epurasitiki kunyauka iri chaizvo kudzorwa inopisa mumhanyi hurongwa. Mapurasitiki anogona kuyerera zvakaenzana mukati mega mhango, zvichikonzera zvikamu zvemhando imwechete. Hot mumhanyi zvikamu vane hwakanaka, yakaderera residual kushushikana uye diki deformation mushure mekuparadza. Zvizhinji zvemhando yepamusoro zvigadzirwa pamusika zvinogadzirwa neanopisa mumhanyi mafuru. Zvikamu zvakawanda zvepurasitiki mumafoni e Motorola, HP maprinta uye maDell laptops anogadzirwa neanomhanya mhanya mafuru.
G. Kukurudzira kugadzirwa kwemuchina
Chigadzirwa chakapedzwa chinoumbwa neanopisa mumhanyi muforoma, hapana chikonzero chekucheresa gedhi, uye iyo inomhanya inotonhora inoshandiswazve. Inobatsira mukugadzira otomatiki. Vazhinji vagadziri vekunze vanobatanidza mumhanyi anopisa neotomation, iyo inovandudza zvakanyanya kugona kwekugadzira.
Kukanganisa kweanopisa mumhanyi system muforoma
Zvichienzaniswa nechando mumhanyi muforoma, zvikanganiso zvinopisa mumhanyi muforoma zvakapfupikiswa zvinotevera zvinhu.
A.Mold Cost Kukwira Hot mumhanyi zvinhu zviri zvinodhura, uye mutengo inopisa mumhanyi Foroma anogona kuwedzera zvikuru. Kana chikamu chakaburitswa chiri chidiki uye chiyero chemutengo weforoma chakakwirira, hachisi mari.
B. Yakakwira michina zvinodiwa Iyo inopisa mumhanyi muforoma inodiwa kuti ive yakagadzirirwa chaizvo. Iko kusanganisa pamwe nekubatana kweanopisa mumhanyi system uye chakuvhuvhu zvakanyanyisa, zvikasadaro kuchave nematambudziko akakomba mukuita kwekugadzirwa kweforoma.
C. Kunetsa kushanda uye kugadzirisa
Zvichienzaniswa nechando mumhanyi muforoma, inopisa mumhanyi muforoma oparesheni uye kugadzira iri yakaoma. Kana ikashandiswa zvisirizvo, zvinomhanyisa zvikamu zvekumhanyisa zviri nyore kukuvadza uye hazvigone kugadzirwa, zvichikonzera kurasikirwa kukuru kwehupfumi.
Kazhinji kutaura, inopisa mumhanyi anoumba ave achinyanya kushandiswa nekuda kwekugona kwavo kwepamusoro uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, pamwe nekuvandudzwa kweforoma kugadzira tekinoroji uye jekiseni michina michina.
Kushandiswa inopisa mumhanyi Kuumbwa
1. Kwehukuru hukuru zvikamu
Kune zvikamu zvine saizi yakareba kupfuura 300 mm, vhoriyamu uye nzvimbo yejekiseni repurasitiki zvakakura nekuda kwehukuru hukuru. Kana iyo plastiki yakanyungudika yatonhorera nekukurumidza, iyo mhango yekuzadza haina kukwana, zvichikonzera kushomeka kweglue uye concave. Sink uye yakajeka fusion tambo, kana tembiricha mutsauko wakanyanya kukura kuti usadzikire kana deformation kumonyoroka kwezvikamu. Naizvozvo, kuwedzera inopisa mumhanyi kuchaita kuti jekiseni remvura mapurasitiki anogara achichengeta tembiricha yenguva refu, uye ave nechokwadi chekuti iyo yakanyunguduka inogona kuzadzwa nekukurumidza uye zvizere. Mhango, uye nekukurumidza kuburitsa kunetseka, tora zvigadzirwa zvinogoneswa. Izvi zvigadzirwa zvinosanganisira: bhokisi rekuchengetedza repurasitiki, bhokisi rekudzoka, pallet yepurasitiki, mota dashboard, bhamba, nezvimwe.
2. Yezvikamu zvakapetwa-zvine masvingo
Kune zvidimbu-zvakakomberedzwa zvikamu zvine ukobvu zvisingasviki 1.0 mm, kupisa kupisa kwakakurumidza uye kutonhora kuri kukurumidza, kunyungudika hakusi nyore kuzadza, kana zviri nyore kwazvo kuburitsa airmark uye zvakakomba deformation. Iko kuzadza kumhanya kwekunyunguduka kunamatira kunogona kuwedzerwa nekushandisa inopisa mumhanyi, iyo inobatsira kune yekuzadza kumhanya kwekunyunguduka kunamatira. Izvo zvikamu zvakaumbwa zvizere. Izvi zvigadzirwa zvinosanganisira nharembozha girafu, pani, nezvimwewo. Kana iyo inomhanya mhanya muforoma ikasanganiswa neyekumhanyisa jekiseni muchina (ese-emagetsi jekiseni muchina), iyo yakatetepa nzvimbo yezvikamu inogona kuve 0.30 mm kusvika 0.50 mm.
3. Inoshandiswa kumatunhu emhando yepamusoro: mumvuri wemwenje, mwenje werambi,
Yakakwira mhando yekunze zvikamu senge mota marambi emwenje uye LED mabheji anoda hukuru hwekujeka uye haigone kuve nehurema muvara uye nemhepo; chiridzwa chepamusoro-mwenje yakajeka pani, pamwe negirazi remidziyo midziyo ganda; saizi hombe Chivharo chekunze chemidziyo yemagetsi chinofanirwa kuve chakashongedzwa nenongedzo-yekudyisa mapoinzi pamusoro pezvikamu, asi hapana mavanga-anodyisa gundi anotenderwa.
4. Inoshandiswa pakuumbwa kwakaomarara zvikamu
Rudzi rwechigadzirwa urwu rwunonyanya kukonzerwa nekudikanwa kwechigadzirwa, kune akawanda matanho uye mbabvu mukati, uye nzira yekuyerera yekunyungudika yakabvaruka, yakaoma uye yakaoma kuzadza. Kune akawanda marudzi emarambi mafuremu.
5. Kune zvikamu zvine hurombo fluidity
Kuti tivandudze uye nekuvandudza zvivakwa zvepurasitiki, isu tinowedzera girazi faibha, murazvo unodzora, simbi hupfu, kabhoni poda uye anti-ultraviolet zvinowedzera kune mapurasitiki. Izvi zvinogona kuvandudza kuenzana kwekugadzikana uye kusanganisa kwezvikamu, uye zvemagetsi zvimiro, kupisa moto, zvivakwa zvemagetsi uye kuramba kukwegura. Semuenzaniso, inoshandiswa kune yekunze junction bhokisi, yekutaurirana chigadzirwa goko, imba yekushandisa ganda uye zvikamu.
6. Kwezvikamu zvakakura zvematch
Iko kudzora kwemitengo yezvikamu zvakakura zvematch zvakakosha. Kuitira kupfupisa iyo jekiseni kuumbwa nguva uye kudzivirira mutengo unounzwa nemubato chikamu, inopisa mumhanyi kuumbwa anowanzo shandiswa.
Mestech kambani inoshanda mune dzakasiyana epurasitiki zvikamu zveforoma kugadzirwa uye jekiseni kugadzirwa. Isu takaunganidza hupfumi ruzivo mukugadzira pachena mwenje wemwenje, hombe yepurasitiki ganda uye anopisa mumhanyi muforoma kune akawanda-mhango jekiseni kuumbwa. Tinotarisira mukana wekushandira pamwe nekukushandira munzvimbo ino. Ndapota taura nesu.
Hunhu hwemumhanyi anopisa Iko kushandiswa kweanomhanya mhanya kufa system tekinoroji iri kuramba ichiwedzera kukura. Rine zvakawanda zvakwakanakira, iyo inosimudzira kukura jekiseni Kuumbwa indasitiri. Kune zvakare zvimwe zvikanganiso izvo isu zvatinofanirwa kufunga nezvazvo mukushandisa. Chakanakira chinopisa mumhanyi hurongwa muforoma
A. Inokodzera zvigadzirwa zvemakuru nekuda kwehukuru hukuru, hombe jekiseni vhoriyamu uye yakakura nzvimbo yezvikamu, zvinonetsa kuchengeta mapurasitiki mune akajairika jekiseni kuumbwa uye kuzadza mhango mune yakanyanya tembiricha yakanyunguduka nyika. Hot mumhanyi multi-poindi jekiseni rinofanira kushandiswa kuona yakazara jekiseni kuumbwa.
B. Inokodzera Zvinhu Zvakaomarara-ku-fomu Yakakwira Viscosity, Yakadzika Viscosity, Yakakwira Kuumba Kupisa. Iyo inomhanya mhanya system inogona kugadzirisa aya matambudziko. Semuenzaniso: jekiseni rehupfu hwesimbi, jekiseni rehupfu hwejekiseni, jekiseni repurasitiki remagineti, jekiseni repurasitiki, thermoplastic rubber (TPE).
C. Mari yekuchengetedza Inopisa mumhanyi jekiseni, hapana kamwene, hapana mumhanyi marara, chengetedza yakawanda yezvinhu zvinodhura.
F.Kuvandudza chigadzirwa mhando Mukugadzira nzira inopisa yemhanyi muforoma, tembiricha yepurasitiki inyauka yakanyatso kudzorwa neanopisa mumhanyi system. Mapurasitiki anogona kuyerera zvakaenzana mukati mega mhango, zvichikonzera zvikamu zvemhando imwechete. Hot mumhanyi zvikamu vane hwakanaka, yakaderera residual kushushikana uye diki deformation mushure mekuparadza. Zvizhinji zvemhando yepamusoro zvigadzirwa pamusika zvinogadzirwa neanopisa mumhanyi mafuru. Zvikamu zvakawanda zvepurasitiki mumafoni e Motorola, HP maprinta uye maDell laptops anogadzirwa neanomhanya mhanya mafuru.
G.Kukurudzira kugadzirwa kwemuchina Chigadzirwa chakapedzwa chinoumbwa neanopisa mumhanyi muforoma, hapana chikonzero chekucheka gedhi, uye iyo inomhanya inotonhora inodzokororwa. Inobatsira mukugadzira otomatiki. Vazhinji vagadziri vekunze vanobatanidza mumhanyi anopisa neotomation, iyo inovandudza zvakanyanya kugona kwekugadzira.
Kukanganisa kweanopisa mumhanyi system muforoma Kuenzaniswa neinotonhora mumhanyi muforoma, kukanganisa kweanopisa mumhanyi muforoma zvakapfupikiswa mune anotevera maficha.
C. Complex oparesheni uye kugadzirisa Kana ichienzaniswa nechando mumhanyi muforoma, inopisa mumhanyi muforoma mashandiro uye kugadzirisa kwakaomarara. Kana ikashandiswa zvisirizvo, zvinomhanyisa zvikamu zvekumhanyisa zviri nyore kukuvadza uye hazvigone kugadzirwa, zvichikonzera kurasikirwa kukuru kwehupfumi.
Kushandiswa inopisa mumhanyi Kuumbwa 1). Kune yakakura saizi zvikamu Zvezvikamu zvine saizi yakareba kupfuura 300 mm, iro vhoriyamu uye nzvimbo yejekiseni repurasitiki rakakura nekuda kwehukuru hukuru. Kana iyo plastiki yakanyungudika yatonhorera nekukurumidza, iyo mhango yekuzadza haina kukwana, zvichikonzera kushomeka kweglue uye concave. Sink uye yakajeka fusion tambo, kana tembiricha mutsauko wakanyanya kukura kuti usadzikire kana deformation kumonyoroka kwezvikamu. Naizvozvo, kuwedzera inopisa mumhanyi kuchaita kuti jekiseni remvura mapurasitiki anogara achichengeta tembiricha yenguva refu, uye ave nechokwadi chekuti iyo yakanyunguduka inogona kuzadzwa nekukurumidza uye zvizere. Mhango, uye nekukurumidza kuburitsa kunetseka, tora zvigadzirwa zvinogoneswa Izvi zvigadzirwa zvinosanganisira: bhokisi rekuchengetedza repurasitiki, bhokisi rekudzoka, pallet yepurasitiki, mota dashboard, bhamba, nezvimwe 2). Kune zvidimbu-zvakakomberedzwa zvikamu zvetete-dzakakomberedzwa zvikamu nehuremu husingasvike 1.0 mm, kupisa kupisa kwakakurumidza uye kutonhora kuri kukurumidza, kunyungudika hakusi nyore kuzadza, kana zviri nyore kwazvo kuburitsa airmark uye zvakakomba deformation. Iko kuzadza kumhanya kwekunyunguduka kunamatira kunogona kuwedzerwa nekushandisa inopisa mumhanyi, iyo inobatsira kune yekuzadza kumhanya kwekunyunguduka kunamatira. Izvo zvikamu zvakaumbwa zvizere. Izvi zvigadzirwa zvinosanganisira nharembozha girafu, pani, nezvimwewo. Kana iyo inomhanya mhanya muforoma ikasanganiswa neyekumhanyisa jekiseni muchina (ese-emagetsi jekiseni muchina), iyo yakatetepa nzvimbo yezvikamu inogona kuve 0.30 mm kusvika 0.50 mm. 3). Inoshandiswa kumatunhu epamusoro ekuratidzika: mumvuri wemwenje, mwenje werambi, Kwakakwirira mhando dzekunze zvikamu senge mota marambi emwenje uye LED mabheji anoda hukuru hwekujeka uye haigone kuve nehurema muvara uye nemhepo; chiridzwa chepamusoro-mwenje yakajeka pani, pamwe negirazi remidziyo midziyo ganda; saizi hombe Chivharo chekunze chemidziyo yemagetsi chinofanirwa kuve chakashongedzwa nenongedzo-yekudyisa mapoinzi pamusoro pezvikamu, asi hapana mavanga-anodyisa gundi anotenderwa. 4). Inoshandiswa kumatunhu akaomarara zvikamu. Rudzi urwu rwechigadzirwa runonyanya nekuda kwekuda kwechigadzirwa, pane matanho mazhinji uye mbabvu mukati, uye nzira yekuyerera yekunyungudika yakavezwa, yakaoma uye yakaoma kuzadza. Kune akawanda marudzi emarambi mafuremu. 5). Kune zvikamu zvine hurombo fluidity Kuti uvandudze nekuvandudza zvimiro zvepurasitiki, isu tinowedzera girazi faibha, murazvo unodzora, simbi poda, kabhoni poda uye anti-ultraviolet zvinowedzerwa kune mapurasitiki. Izvi zvinogona kuvandudza kuenzana kwekugadzikana uye kusanganisa kwezvikamu, uye zvemagetsi zvimiro, kupisa moto, zvivakwa zvemagetsi uye kuramba kukwegura. Semuenzaniso, inoshandiswa kune yekunze junction bhokisi, yekutaurirana chigadzirwa goko, imba yekushandisa ganda uye zvikamu. 6). Kune akakura batch zvikamu Izvo kudhura kwemitengo yezvikamu zvakakura zvebatch kwakanyanya kukosha. Kuitira kupfupisa iyo jekiseni kuumbwa nguva uye kudzivirira mutengo unounzwa nemubato chikamu, inopisa mumhanyi kuumbwa anowanzo shandiswa.
Pashure: Plastic jekiseni anoumba
Zvadaro: Matipi ezve chaiyo epurasitiki zvikamu dhizaini uye kuumbwa
Plastic muforoma kuti Laser bvudzi rokubvisa muchina